दाङलाई राप्रपामय बनाउने हामिहरुको दृढ संकल्प छ–कार्यवाहक अध्यक्ष भुपाल रावत – जागरण अनलाइन
दाङलाई राप्रपामय बनाउने हामिहरुको दृढ संकल्प छ–कार्यवाहक अध्यक्ष भुपाल रावत
२०७६ असार १७, मंगलवार १०:३३ मा प्रकाशित
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिल्ला कार्यसमिति दाङका का.वा. अध्यक्ष समाजसेवी, सामाजिक अभियान्ता भुपाल रावत संग समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर सूचनापत्र साप्ताहिक पत्रिकाको साता कुराकानीमा यस पत्रिकाका सह–सम्पादक अनिलकुमार शर्मा ले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप प्रस्तुत गरिएको छ ।
यहा“लाई स्वागत छ?
¨ धन्यवाद ।
हिजो आज यहा“को व्यस्तता केमा रहने गरेको छ ?
¨ म हिजो आज पार्टीकै काममा व्यस्त छु, पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने उद्देश्यका साथ संगठन सुदृढीकरणका लागि निरन्तर कार्यकर्ताहरु माझ पुगिरहेको छु । कार्यकर्ताहरुले दिएको सल्लाह सुझावलाई शीरोधार्य गर्दै पार्टी संगठन सुदृढीकरण अभियानलाई तीव्र गतिमा अघि बढाई दाङ जिल्लालाई राप्रपामय जिल्ला बनाउनमा क्रियाशील छु साथै म व्यवसायी पनि भएकोले आफ्नो व्यवसाय तर्फ पनि क्रियाशील छु ।
राप्रपाले मुलुकलाई हिन्दुराष्ट्र कायम गराउनको लागि कस्तो कार्यक्रम गरिरहेको छ ?
¨ राप्रपाले मुलुकलाई हिन्दुराष्ट्र कायम गराउनको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरु लिई जनताहरु माझ पुगेको छ । राष्ट्रिय स्वाभिमान यात्रा सम्पन्न गरिसकेको छ, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय निकायहरुमा धर्ना कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ, धर्म निरिक्षेपको व्यानर र प्लेकार्ड जलाउने कार्य सम्पन्न भएको छ । मुलुक हिन्दुराष्ट्र कायम गरिनुपर्छ भन्ने २२ बुँदे माग सहित सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ सोही अनुरुप सरकारले वार्ताको लागि बोलाएको छ, पहिलो चरणको वार्ता पनि सम्पन्न भएको छ, सरकारले हाम्रो माग अवश्य सम्बोधन गर्नेछ र मुलुकलाई हिन्दुराष्ट्र घोषणा गर्नेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।
राप्रपाको दाङमा संगठन सुदृढीकरण अभियान कस्तो छ ?
¨ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दाङको संगठन सुदृढीकरण अभियान तीव्र रुपमा अघि बढेको छ । जिल्ला स्थित सम्पूर्ण स्थानीय तहसम्म आफ्नो संगठन विस्तार गर्ने अभियानमा रहेको छ । पार्टीका जनवर्गीय संगठनहरुले पनि संगठन सुदृढीकरण अभियानलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएका छन् । हाम्रो दुर्भाग्य पार्टी पटक पटक फुट्दै जुट्दै गरेको कारणले संगठन विस्तार गर्न अलि कठिनाई भएको मैले महसुस गरेको छु । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, उदारवादमा विश्वास राख्ने सम्पूर्ण नेपाली जनताहरु राप्रपा निकट रहेको हामीले पाएका छौं । राष्ट्रवादीको मुल जरो हामी भएकोले हामीलाई संगठन सुदृढीकरण गर्न खासै अप्ठ्यारो भएको छैन । दाङ जिल्लामा राप्रपाले संगठन सुदृढीकरण अभियानलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउदै जनताको मनभित्र बस्न सफल भएको मेरो बुझाइ छ ।
राप्रपा पटक पटक विभाजन हुनुका पछाडी के कारण छन् ?
¨ राप्रपाभित्र सैद्धान्तिक मतभेद केही छैनन् तर पनि पटक पटक पार्टी विभाजन हुनाले कार्यकर्ताहरु निरास छन् । नेतृत्व तहमा रहेका नेताहरुका मतभेदका कारण पार्टी पटक पटक विभाजन हुँदै आएको छ । जसको प्रत्यक्ष असर कार्यकर्ताहरुमा परेको छ । कार्यकर्ताहरुको भावना विपरित केन्द्रीय नेतृत्व चल्दा पार्टीको यो अवस्था भएको हो । हिजो मुलुकको तेस्रो शक्ति राप्रपा अहिले कुन अवस्थामा पुग्यो केन्द्रीय नेतृत्वमा बस्ने नेताहरुले यसको मनन गर्न जरुरी छ । पार्टी विभाजनले ल्याएको विचलनलाई नेतृत्व तहले अब राम्ररी बुझिसकेका छन् । अब पार्टी विभाजन नभई एकीकरण हुँदै जाने छ भन्नेमा कार्यकर्ताहरु ढुक्क छन् ।
राप्रपा र राप्रपा (संयुक्त) पार्टी बिच एकीकरण सम्भव छ ?
¨ राप्रपा र राप्रपा (संयुक्त) पार्टी एकीकरणको सम्भव छ । शीर्ष तहका नेताहरु त्यसको आन्तरिक गृहकार्यमा जुटिरहनु भएको छ । जिल्ला तहमा पनि पार्टी एकीकरणको लागि गृहकार्य भई रहेको छ । राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले सार्वजनिक रुपमै पार्टी एकीकरणको लागि म जस्तो सुकै मुल्य चुकाउन पनि तयार छु र पार्टी अध्यक्षबाट राजिनामा दिई पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने छु भन्ने अभिव्यक्ति दिएकाले पार्टी एकीकरण हुन्छ भन्ने कुरामा दुई मत छैन । जबसम्म राष्ट्रवादी शक्तिहरु एकै थलोमा आउँदैनन् तबसम्म राष्ट्रियताको संरक्षणमा प्रश्न चिन्ह उठिरहने छ । राष्ट्रवादी शक्तिहरुको मिलन नै वैकल्पिक प्रजातन्त्रिक शक्तिको उदय हो । त्यसैले ढिलो चाँडो दुई पार्टी एक हुने छ भन्ने कुरामा म ढुक्क छु ।
मुलुक धर्म निरक्षेप भईसकेपछि राप्रपाले हिन्दु राष्ट्रको माग गर्नु न्यायोचित हो ?
¨ राप्रपाले हिन्दुराष्ट्रको माग गर्नु न्यायोचित छ । राप्रपाले जनताको चाहनाअनुसार नै हिन्दुराष्ट्रको माग गरेको छ । ९४ प्रतिशत ॐकार परिवार मुलुकभित्र रहेका छन् जो हिन्दु राष्ट्रप्रति आस्थावान छन् । आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराको पहिचानको लागि जनताले हिन्दु राष्ट्रको माग गरेका छन् । राप्रपा जनताको पार्टी भएकाले जनताको इच्छाअनुसार चल्ने गरेको छ । विगतमा हामीले आलोचनात्मक रुपमा धर्म निरक्षेपलाई स्वीकारेका थियौं तर जनताको चाहना त्यो रहेनछ । हाम्रो मन, मुटुभित्र हिन्दु राष्ट्र नै छ । लोकतन्त्रमा पार्टीले आफ्नो एजेण्डा जनता माझ लैजान पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । सोही अधिकारको प्रयोग गर्दै राप्रपाले हिन्दुराष्ट्र पुनस्थापनाको माग गरिरहेको व्यहोरा तपाईहरु माझ अवगत गराउन चाहन्छु ।
अहिले मुलुकमा धर्म परिवर्तन गराउनेहरुको संख्या दिनानुदिन बढ्दो छ यसको रोकथामका लागि राप्रपाले के गर्दै छ ?
¨ हाम्रो मुलुकमा ९४ प्रतिशत ॐकार परिवार रहेका छन् । ती ॐकार परिवारको आस्थालाई कसैले घेराबन्दीमा पारेर धर्म परिवर्तन गराउन खोज्छ भने त्यो आफै नष्ट भएर जाने पक्का छ । ढिलो चाँडो नेपाली जनताले स्वस्फूर्त रुपले हिन्दुधर्मप्रति वितृष्णा फैलाउनेहरुलाई लखेट्ने छन् । राप्रपाले जनताको चाहनाअनुसार हिन्दुधर्मको संरक्षण, सम्बद्र्धनको लागि निरन्तर आवाज उठाइ रहेको छ, सामाजिक सद्भाव कायम हुनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेको छ, कसैले कसैको धर्मप्रति हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन भनिरहेको छ, सामाजिक सचेतनामुलक कार्यहरु जनतामाझ लगिरहेको छ र सम्बन्धित जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा त्यस्ता धर्म परिवर्तन गराउँदै हिड्नेहरुलाई कारबाहीको माग सहित ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
राप्रपा जनतामाझ कस्तो कार्यक्रम लिई गएको छ?
¨ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राष्ट्रियताका मुद्दाहरु जनता माझ लिएर गएको छ । सरकारले गरेका गलत कामहरुको भण्डाफोर जनता माझ गर्दै आइरहेको व्यहोरा तपाईहरु माझ जानकारी गराउन चाहन्छु ।
के मुलुकमा राजसंस्था पुनःस्थापित हुने सम्भावना छ ?
¨ राजनीतिको शब्दकोषमा असम्भव भन्ने केही पनि हुँदैन । यदि जनताले चाहे भने जस्तोसुकै कार्य पनि सम्भव भई छोड्छ । हामीले विश्व इतिहासलाई हे¥यौं भने पनि त्यस्ता कयौं उदाहरणहरु हाम्रा सामु छन् । मुलुकमा सर्वेसर्वा जनता हुन्छन्, यदि जनताको चाहना राजसंस्था पुनःस्थापित गराउने भयो भने राजसंस्था अवश्य पुनःस्थापित हुन्छ । नेपालको दोस्रो जनआन्दोलनको म्यान्डेड सक्रिय राजतन्त्रको अन्त्य थियो संवैधानिक राजसंस्थाको थिएन । अब समय आइसकेको छ, जनताले बुझि सकेका छन् र जनताले नै राजसंस्था पुनःस्थापित गराउने कुरामा दुईमत छैन ।
तपाईले राजनीतिक यात्रा कहिलेदेखि प्रारम्भ गर्नु भयो ?
¨ मेरो परिवारिक पृष्ठभूमि राजनीतिमय छ । मेरो पिताजी पनि राजनीतिमा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो । पिताले गरेको समाजसेवाबाट म प्रभावित भएको थिए । म सानैबाट समाजसेवामा क्रियाशील भए । पिताजीको प्रेरणाबाट म समाजसेवी हुँदै राजनीतिमा क्रियाशील हुन पुगे । विगतमा मैले शिक्षण पेशालाई अंगाल्दै समाजसेवालाई क्रियाशील बनाइ राखे, व्यवसायमा संलग्न हुँदा पनि समाजसेवामा क्रियाशील भई नै रहे, मैले विभिन्न क्षेत्रमा रही समाजसेवा गरिसकेको छु, यातायात क्षेत्रमा पनि काम गरिसककेको छु भने मेरो राजनीतिक यात्रा २०४६ सालमा नेपाली कांग्रेसको भातृसंगठन नेविसंघबाट प्रारम्भ भएको हो । समयक्रमअनुसार मलाई राप्रपाको राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवादले आकर्षित ग¥यो र म राप्रपाको कार्यकर्ता बने । राप्रपाको वडा, गाउँ, नगर, क्षेत्र हुँदै जिल्लाको सदस्य र उपाध्यक्षको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेको छु र हाल राप्रपा जिल्ला कार्यसमिति दाङको का.वा. अध्यक्षको हैसियतले पार्टीले दिएको सम्पूर्ण जिम्मेवारीहरु स्वःस्फुर्तरुपमा वहन गरिरहेको छु ।
तपाईका शुभेच्छुक तथा कार्यकर्तालाई केही भन्नु छ ?
¨ राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवादको संरक्षणको लागि सम्पूर्ण राष्ट्रवादी शक्तिहरु एक हुन जरुरी छ । त्यसका लागि राप्रपाका आम कार्यकर्ताहरु एक ढिक्का हुन जरुरी छ । राप्रपाको संगठन सुदृढीकरण अभियानमा सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरुको साथ सहयोगको अपेक्षा मैले लिएको छु । जनताको चाहना संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र कायम हुनुपर्छ भन्ने रहेको छ यसमा तपाईहरुको साथ र सहयोगको खाँचो हामीलाई रहिरहनेछ ।
¨ मलाई समसामयिक राजनीतिक विषयमा मेरा विचारहरु राख्ने सुअवसर दिनुभएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
व्यवसायीको पेशागत हकहित नै हाम्रो प्राथमिकताः दाङ चेम्वरका अध्यक्ष श्रीधर महरा २०७६ असार १७, मंगलवार १०:३३
वडालाई बजेट वितरण सन्तुलित ढंगबाट २०७६ असार १७, मंगलवार १०:३३
सडक विस्तार नै पहिलो प्राथमिकताः वडाध्यक्ष बुढा २०७६ असार १७, मंगलवार १०:३३